musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » National Geographic Dzidzo: Banking kuEjipitori
Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! • dzidzo
National Geographic Kudzidza, chiratidzo cheCengage Group, nhasi vazivisa kuti vapinda mukudyidzana kwenguva refu neIjipita Ministry of Education, vachipa giredhi 4-6 kharikhulamu kune vangangosvika mamirioni manomwe vadzidzi muEjipitori.
Sangano reNational Geographic, iro rinoendesa zvinhu zvekudhinda uye zvemadhijitari, chikamu cheGurukota reDzidzo Dr. kufunga uye kudada kwevaIjipita. Uine zvinopfuura Vadzidzi vane mamirioni makumi maviri vakanyoresamuK-12, Egypt ine dzidzo huru kwazvo muMiddle Eastand Africa. Zvisinei, dzidzo muEjipitori haina kumbobvira yaenderana nekugadzirira vadzidzi neaya 21st hunyanzvi hwemazana ekugadzirisa matambudziko hunodiwa kuvaka mabasa ane chinangwa.
"Tinoda kuti vadzidzi vadzidze kweupenyu hwese, kwete bvunzo," akadaro Dr. Tarek Shawki, Gurukota redzidzo nehunyanzvi hweEjipitori. “Taida mumwe wedu anokwanisa kutibatsira kudzidzisa vadzidzi hunyanzvi hwebasa remangwana nekubudirira muhupenyu, kutanga vachiri vadiki. "
Kutsigira shanduko yedzidzo yeEjipitori, National Geographic Kudzidza iri kuendesa zvidzidzo zveChirungu, Zvemagariro Zvidzidzo, Unyanzvi hweKubasa uye Ruzivo neKutaurirana Technology (ICT). Unyanzvi hwebasa uye ICT zvakanyanyisa kukosha kune iyo Dzidzo 2.0 chiono muEjipitori, sezvo ivo vachizivisa vane makore gumi nemaviri-gumi nemaviri kumabasa akasiyana-siyana avanogona kunge vasingazive nezvazvo, uye hunyanzvi hwavaizoda kuti ubudirire mune ramangwana munzvimbo idzodzo. .
"Bazi redzidzo muEjipitori rakatora nzira yekumisikidza kudzidza, inovimbisa kuti chizvarwa chinotevera chinosimudzira ruzivo, hunyanzvi hwehupenyu, uye hunhu hwebudiriro mune ramangwana," akadaro Alexander Broich, Mutungamiri weCengage Global Bhizinesi uye General Manager weChirungu Mutauro. Kudzidzisa. “KuCengage Group, tinotenda zvakasimba mukuda kugadzirira vadzidzi hupenyu ne basa. Chinangwa chedu ndechekuona kuti vadzidzi havana kungogadzirira degree, asi basa rakagadzirira. Ministry yeEgypt yeEducation yakanyatsoenderana nechinangwa ichi, uye tinodada kubatsira kuunza kudzidza kuhupenyu, mukushandira shanduko yaDr Shawki yekukurudzira Dzidzo 2.0. ”
Pamusoro pekupa echirungu kosi yechikamu chekudyidzana, zvemukati zveICT zvichapihwa muChirungu neArabhu kubatsira kuwedzera kudzidza kweChirungu kwevadzidzi sechikamu chedzidzo yepuraimari.
"Unyanzvi mumutauro weChirungu unoitawo basa rakakosha mukubatsira kugadzirira vadzidzi pasi rese kuti vawane musika webasa," Broich akaenderera mberi. "Tinotenda kuti hafu yepasi rose ichataura kana kudzidza Chirungu panosvika gore ra2030 nekuti Chirungu chine hunyanzvi ndiwo musuwo webasa rinovimbisa remamiriyoni pasirese."
Dzidzo yacho inokurudzira vaIjipita uye National Geographic Explorers kubatsira kuita, kukurudzira uye kuisa kudada muvadzidzi veEjipitori.
"National Geographic ine nhoroondo refu yekuvhenekera uye kuchengetedza chishamiso chenyika yedu," akadaro Fred Hiebert, Archaeologist muResidence yeNational Geographic Society, uye nhengo yeNational Geographic Learning's Advisory Council for the Egypt Ministry kudyidzana. “Nyaya dzinotaura nezvekukanganiswa kwenhoroondo nemagariro evanhu panyika ino ndeimwe yenhaka yakasarudzika yeNational Geographic. Hapana mumwe muenzaniso uri nani pane uyu kufukidzwa kweNational Geographic nezveIjipita, imwe yetsika dzekare kupfuura dzose dzinozivikanwa. ”
Hiebert akaenderera mberi achiti, "Kubatana uku mukana wakanaka kwazvo weNational Geographic kukwidziridza manzwi enzvimbo nemasayendisiti muEjipitori."
Zvikoro zvese zvepuraimari muEgypt zvese zvakatanga kushandisa National Geographic Kudzidza kosi muna Gumiguru 9, kutanga negiredhi rechina kwegore razvino redzidzo, uye kuwedzera kusvika pagiredhi rechishanu nerechitanhatu mumakore maviri anotevera.
Nezve National Geographic Kudzidza
National Geographic Kudzidza, iyo Cengage Boka brand, ndiyo inotungamira yekuparidzira yekudzidzisa yeChirungu Mutauro Kudzidzisa uye sekondari misika yepasirese. KuNational Geographic Kudzidza, tinotenda kuti mudzidzi anoshanda uye anokurudzirwa achave anobudirira, uye tinogadzira zvinhu zvedu nenzira inofambidzana yekutaura nyaya inova nzira huru yekukumbira kubatana uku. Kuti udzidze zvakawanda, shanyira: eltngl.com.
Nezve Cengage Boka
Cengage Boka, yepasirose kambani tekinoroji yedzidzo inoshandira mamirioni evadzidzi, inopa zvinodhura, zvemhando yepamusoro zvigadzirwa nemasevhisi ayo anoshongedza vadzidzi nehunyanzvi uye kugona kunodiwa kuti vagadzirire basa. Kwemakore anopfuura zana, isu takagonesa simba uye mufaro wekudzidza pamwe nekuvimbika, kuita zvemukati, uye ikozvino, mapuratifomu edhijitari.